Dhambaal Jacayl oo ku socda Gabar uu Ninkeeda aad u jecelyahay (Qeybtii 2-aad) - Aayaha
Dhambaal Jacayl oo ku socda Gabar uu Ninkeeda aad u jecelyahay (Qeybtii 2-aad)
Aayaha editorSeptember 21, 2018
Nin walba oo guul badan guushiisa waxaa ka dambeysa haweeney, qof oraahdan dhahayna wuuku saxnaa boqolkiiba boqol, waxaa tahay sirta ka dambeysa guusheyda, xaaskeyga qaaliga ah waanku jeclahay.
Nolosheyda iyo dunideyda ayaad bedeshay, waxaan xukumi weysnaa nafteyda balse waxan ahay qof la bedelay, qalbigeyda adigaa iskaleh, iyadaa iskaa siisay si waali ah iyo si qoto dheer Ayaan kuu jeclahay.
Dagaalka, muranka waxwalba, shumiska iyo dhoola cadeynta iyo carada intaba waanka sinnaaneynaa mana ahan hadda kaliya balse waligeen, waanku jeclahay.
Dhaqtarka wuxuu isheegay inaan daawooyin u baahanahay si cimrigeyga u dheeraado balse waxaan qiyaasayaa in wax dhan ee aan u baahanahay si cimrigeyga u dheeraado uu yahay saameynta jacaylkaaga gacaliso, waanku jeclahay.
Markii aan nolosheyna mideyna waligeen, had iyo jeer waan ogeen in culeysyo badan ay si baxayaan si kastaba , jacaylkeena ayaa culeys walba ka guuleystay, jacaylkeyga aad ayuu kuugu weynyahay waxaan rabaa inaad had iyo jeer iijeclaatid sida aan kuu jeclahay.
Fiyaaroyaasha waxay u baahanyihiin qoraxda, ubaxa waxa uu u baahanyahay biyaha, balse cid kasta ayaa og inaan kuu baahanahay, sanaduhu wey deg degayaan, ilmadu wey way qalali kartaa, balse jacaylka aankuu qabo waligiis ma baaba’ayo.